Cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay gobolka Minnesota -
Cudurka jadeecada ayaa ka dillaacay deegaanno ka mid ah gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaana ilaa inta la ogyahay cudurka laga helay lana xaqiijiyey sagaal qof, halka wali baaritaan lagu ogaanayo tirada dhabta ah ama inta qof ee uu cudurkani saameeyay.
Sideed kamid ah sagaalka qof ee cudurka laga helay ayaa iyagu noqday carruur Soomaaliyeed.
Jadeecadu waa cudur si dhaqsa ah loo kala qaado oo saameeya sambabada iyo hawa mareenka. Dhawr qof oo qaba cudurkan ayaa lagu sheegay magaalooyinka mataanaha ah iyo kuwa la dariska ah. Jadeecada waxaa keena jeermiga ‘Virus’-ka loo yaqaano.
Cudurka jadeecada ayaa halis noqon kara oo sababi kara ama saameeynkara dhegaha, sambabada, mararka qaarkoodna dhimasho keeni kara. Dhakhtarkiina ka hubso in adiga iyo caruurtaadaba aad qaadateen tallaalkan. Hadii aadan la`heyn caymiska caafimaadka (Health Insurance), waxaad tallaalkan ka heli kartaan goobaha tallaalka ee caafimaadka dadweynaha.
Shaqaalaha Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Minnesota ayaa xusay in ay deegaanada uu cudurku ka dilaacayna u direen kooxo ka hawl gala si loo xakameeyo in cudurkan uu saameeyo dad kale oo cusub.
Waa maxay aastaamaha jadeecada?
Aastaamaha jadeecada rubella waxaa ku jiro:
qandho heer hooseeya ah
bararka qanjirada ka dambeeyo dhagaha iyo qoorta
Nabraha guud ahaan waxay u muuqdaan midka koowaad wajiga oo ka dhaqaaqaa madaxa illaa cagta, soconayo qiyaastii 3 maalmood. Aastaamaha jaddeecada Rubella waxaa ku jira kara xubno xanuunka, gaar ahaan kuwa ka mid ah hablaha weyn. Illaa kala bar dadka oo dhan ee ku dhacay jadeecada rubella ma lahan aastaamo.
Jadeecadu yeey ku dhacdaa?
Qof walba ee aan laga tallaalin ama uusan ku dhacin jadeecada rubella wuu ku dhici karaa cudurka. Sababtoo ah waxaa jiro dadka aduunkoo dhan iyo Mareykanka ee aan la tallaalin, waxaa suurtogal ah in safrayaasha qaadsan waxay qaadsiin karaan jadeecada rubella dadka aan tallaalneyn.
Miyuu jiraa tallaalka jadeecada?
Haa. Tallaalka jadeecada rubella wauxuu wataa tallaalka MMR (Jadeecada, qaamo bararka, Jadeecada Rubella).
Sidee ayay jadeecada rubella u faaftaa?
Jadeecada rubella waxaa lagu faafin karaa markii qof qaba jadeecada rubella uu ku qufaco ama ku hindhiso dhinacaaga, ama haddii aad taabatid dheecaanada ka imaanaya afka ama sanka qofka qaba jadeecada rubella oo kadid taabto indhacaaga, sankaaga, ama afkaaga.
Mudada u dhaxeyso gaarista faayruska iyo bilowga jirada inta badan 14 maalmood, laakin waxay iska badeli kartaa ka bilow 12 illaa 23 maalmood. Qofka qaba jadeecada rubella wuxuu u faafin karaa dadka kale ka bilow 7 maalmood ka hor illaa 7 maalmood kadib markuu nabraha muuqdo.
Maxaa la sameyn karaa si looga hortago jadeecada rubella?
Tallaalka waa wadada ugu wanaagsan ee looga hortago jadeecada rubella. Tallaalka baahsan ee la dagaalamo jadeecada rubella way ku adagtahay xakameynta baahsanaanta cudurka iyo ka hortagida ciladaha dhalashada ee uu sababay CRS.
Miyay jiraan daaweyn jadeecada rubella ah?
Ma jiraan wax daaweynta jadeecada rubella. Daryeel bixiyaha caafimaadkaaga waxaa usuurtogali karto inuu ku caawiyo daaweynta qaar ka mid ah aastaamaha.
Related Items:Featured, Somali, Somali community, Somali Health, Somali immigrants, Somali Minneapolis
TAYO AND THE COALITION OF SOMALI AMERICAN LEADERS TO HOST TWO-DAY LEADERSHIP SUMMIT